Ra'yiga laga uruuriyay dadwaynaha Muqdisho - BBC News Somali
Ra'yiga laga uruuriyay dadwaynaha Muqdisho
30 Nofembar 2010
Ra'yi uruurin ay BBC dalbatay oo ay hay'adda ORB ay ka qaadday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa lagu ogaaday in in ka badan kala bar dadwaynaha magaaladaas ay dagaaladu aafeeyay ay dareensan yihiin in dunidu iska ilowday Soomaaliya.
ORB, waxay ra'yigan ka qaadday dad tiradoodu ay tahay 855 ruux oo ku nool 14 Degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir intii u dhexeysay 29kii October – 12kii November 2010.
Sagaashan iyo laba boqolkiiba qoysasku waxaysheegeen in aysan awoodin in ay nolol maalmeedkooda kaafiyaan.
Ra'yiga ayaa waxaa laga dhex uruuriyay qayb sample ah oo dadka wakiil ka ah degmo walba ee magaalada oo ay ku jiraan goobaha dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee al-Shabaab uu ka taliyo.
Todobaatan iyo kow boqolkiiba dadka su'aalaha la waydiiyay ka jawaabay waxay sheegeenin ay u arkaan mucaaradka, oo loola jeedo al-Shabaab awood dhinaca xun u janjeerta oo aysan jeclaan lahayn in ay xukunka qabsadaan.
In wax yar ka badan kala bar dadka la waraystay ayaa aaminsan in midowga Africa ciidamadiisa jooga Muqdisho ee maamula ku dhowaad kala bar magaalada in ay soo afjari karaan khilaafka sanadaha ka socday Soomaaliya, oo dowlad dhexe aan yeelan muddo labaatan sano ku dhow.
Cara Carter, waxay ka tirsan tahay shirkadda ORB ee ra'yi uruurinta samaysay.
"Soomaalidu mar walba way niyad fiican yihiin, waa mid ku jirta dhaqankooda. Oo ku jirta dabiicinimadooda. Waxaan halkaas ra'yiga ka uruurinaynay ilaa sanadkii 2008, mar walbana way muuqanaysay niyad wanaaga aan leexleexad lahayn. Taas waxaan u tarjumi lahaa rajo, ku tilmaameen filid ama saadaalin."